लकडाउनले गर्दा भो’काएका मानिसहरूलाई हवाई विमान बाट घरघरमा खाना पु’र्‍याउँदि यी पाइलट…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
काठमाडौं : को’रोनाभाइ’रस महामा’रीका कारण कै’यौं मानिसहरुको जीवन निकै नरा’म्रोसँग प्र’भावित भएको छ । विश्वभरीमा रोज’गारी निकै कम भएका छन् । कै’यौं क्षेत्रहरु निकै नरा’म्रोसँग प्रभावि’त भएका छन् ।
यसरी प्रभा’वित भएको मध्ये उ’ड्डयन क्षेत्र प्रमुख हो । महिनौंदेखि विश्वका कै’यौं क्षेत्रमा लक’डाउन भएका कारण ह’वाइ उडा’नहरु अत्या’धिक घ’टेका छन् । यसले उड्ड’यन क्षेत्रमा धेरै नो’क्सानी भएको छ । महामा’रीले उडान नहुँदा रुसका एक पाइ’लटले डे’लीभरी ब्वा’यको काम गर्न थालेका छन् । अहिले उनले खाना घरघरमा पु¥र्याउने काम गर्छन् ।
रुसका युवा पा’इलट रोमनले आफ्नो पहिलेको र अहिलेको तस्वीर सामाजिक सं’जालमा पो’स्ट गरेका छन् । रुसको सामाजिक सं’जालमा रोमनले आफ्नो पहिलेको र अहिलेको अ’वस्था देखाउँदै २ फोटो रुसको सामाजिक सं’जाल पि’काबुमा पोस्ट गरेका थिए जुन अत्य’न्तै भा’इरल भइरहेको छ ।
रोमनको एउटा फोटो २०१९ को हो र अर्को फोटो २०२० सालको हो । यी तस्वी’रबाट रोमनले आफ्नो जीवन १ वर्षमा कसरी पूरै बदलियो भन्ने देखाउन खोजेका छन् । एक वर्ष पहिले रोमन पा’इलट थिए । एक वर्षपछि अहिले उनी डे’लीभरी ब्वा’यको काम गर्छन् र घरघरमा खानाको पा’र्सल पु¥र्याउँछन् ।
बोर्ड पा’ण्डासँग कुरा गर्दै रोमनले भने ‘म २३ वर्षको युवक हुँ र विगत ३ वर्षदेखि पा’इलटको रुपमा काम गरिरहेको छु । महामा’रीका कारण उड्ड’यन क्षेत्रलाई निकै ठूलो नो’क्सानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष म एक महिनामा ९० देखि १०० घण्टा उडा’नमा हुन्थें तर यो वर्षै मैले पूरै वर्षभरीमा केवल १४० घण्टा मात्रै उडा’नमा बिताएको छु ।
रोमनका अनुसार उनी अहिले पनि एयरला’इन्समा पा’इलटको रुपमा काम गरिरहेका छन् तर वि’मान उ’डाउने काम भने छैन ।रोमनका अनुसार अहिले उनी पा’इलटको रुपमा का’र्यरत भए पनि वि’मान उडा’उने काम गर्नु परिरहेको छैन ।
औ’सतमा उनले एक महिनामा एक फ्ला’इट मात्रै उ’डाउन पाउँछन् । यसको अर्थ उनी लगभग पूरै महिना खाली छन् । यही कारण उनले वि’मानका स्पे’यर पार्ट पसलमा से’ल्स एजे’न्टको रुपमा काम गर्न थालेका छन् ।
सप्ता’हान्तमा उनले खाना डेली’भरीको काम गर्छन् । उनले आफूलाई डेलीभरीको काम गर्नु पनि कुनै समस्या नभएको बताए । ‘एक हप्ता कम्प्यु’टर स्क्रि’नअगाडि बिताएपछि तपाइँ बहर घुम्न पाउनुहुन्छ, मानिसहरु देखिन्छन् र खाना डे’लीभरी गर्दै गर्दा तपाइँ मन पर्ने सं’गीत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ । मलाई धेरै स’मस्या छैन’ उनले भने ।
Prevमाहाबिर पुनले गण्डकी प्रदेशलाई दिए एम्बुलेन्स…हेर्नुहोस । उहाँलाई उच्च सम्मान !
Nextबधाई ! उदयपुर बेल्टारमा प्र’हरी जवान भए कार्तिक महिनाको सर्वो’त्कृष्ट प्रहरी घो’षित…हेर्नुहोस् ।